2000 Group ( B-19 ) မှတ်စု (၂၁) by May Aye Oo | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » 2000 Group ( B-19 ) မှတ်စု (၂၁) by May Aye Oo
2000 Group ( B-19 ) မှတ်စု (၂၁) by May Aye Oo
Posted by Swal Taw Ywet on Jun 11, 2012 in Think Different |0comments
by May Aye Oo on Tuesday, June 7, 2011 at 8:42am ·
ချစ်သမီးလေး… သို့ …
မနေ့က သမီးလေးနဲ့ ခဏလေးရယ်.. တွေ့ရတာ..။
သမီးလေးရင်ထဲက ခံစားချက်ကလေးတွေကို … လိုက်ပြီး ခံစားကြည့်.. တွေးကြည့်မိတယ်…။
သမီးလေးက… တကယ်တော့… ကလေး.. လေး.. ပါကွယ်..။ သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ကလေး လေးပေါ့…။
ဒီစာကို ဖတ်တဲ့ အခါမှာ… သမီးလေးက… ဒီလိုစဉ်းစားလိုက် …
သမီးလေးကို ရင်ခွင်ထဲမှာ.. ထားပြီး.၊ သမီးလေးရဲ့ ဆံပင်လေးတွေကို သပ်ပေးပြီး…၊ သမီးလေးကို ဖက်ထားပြီး ..၊
နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ .. ပြောနေတာ… လို့…။
သမီးလေးက.. မေမေ့ရင်ခွင်ထဲမှာ .. ခေါင်းကလေး.. မှီပြီး.. မျက်လုံးလေးကို မှိတ်… စိတ်ကလေးတွေ.. ဖြေလျော့ပြီး … နားထောင်နော်…။
လောကကြီးမှာ.. အကြီးကျယ်ဆုံး..၊ အမြင့်မြတ်ဆုံး…၊ ဖြစ်တဲ့ မြတ်စွာဘုရား ရဲ့ အကျင့် ၃ ပါး အတိုင်း.. ကျင့်ကြရမယ်..။
အဲဒါ.. စရိယ ၃ ပါးပေါ့..။
ဉာတတ္ထ စရိယ နဲ့
အတ္တတ္ထ စရိယ… တဲ့..။
လောကတ္ထ စရိယ ဆိုတာ.. လောကသားတို့၏ အကျိုးစီးပွား ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း… တဲ့။
လောကသား အားလုံးဆိုတော့ .. လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အသားအရောင်.. မခွဲခြားဘဲ.. လောကသား အားလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွား ကို ဆောင်ရွက်တာပေါ့.. ကွယ်..။ အများကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ သမီးလေး.. လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်.. မဟုတ်လား..။ အခမဲ့ ဆေးကုပေးတဲ့ အခါမယ်.. လူမျိုး၊ ဘာသာ မခွဲခြား ဘဲ ကုပေးခဲ့တာဘဲလေ..။
(နောင်လဲ .. ဒီအလုပ်ကို လုပ်ရမယ်.. နော်.. သမီးလေး..)
အဲဒီလိုမျိုး အများကြီး မလုပ်နိုင်သေးရင်.. နဲနဲလေး.. လျော့…
ဉာတတ္ထ စရိယ … အဆွေအမျိုး တို့ ၏ အကျိုးစီးပွား ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း… တဲ့။
ဒါကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အတွက်..၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်..၊ ကိုယ့် လူမျိုး အတွက်… ပေါ့..။
ဒါလဲ.. အများကြီး မဟုတ်တောင်.. သမီးလေး.. လုပ်ပေးခဲ့ ဖူးတာဘဲ..။
အဲလိုမျိုး အများကြီး လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် ကို.. အတ္တတ္ထ စရိယ… ကို အရင်ဆုံးဖြည့်ကျင့်ရအုံးမှာ..။
အဲဒါကတော့ .. မိမိ၏ အကျိုးစီးပွား ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း… တဲ့။
သူတပါးကို.. ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ.. ကိုယ့်မှာ.. ရှိနေမှလေ.. ဟုတ်တယ်မလား.. သမီးလေးရေ…။
ရေ ငတ်သူကို ငှဲ့ပေးဖို့ ကိုယ့်ခွက်ထဲမှာ.. ရေရှိရမယ်..။ ကိုယ့်မှာ မှ မရှိဘဲ နဲ့ .. သူများ ကို ဘယ့်နှယ်… ပေးမလဲ.. ကွယ်.. ဟုတ်လား..။
အခု သမီးလေးက .. အတ္တတ္ထ စရိယ… ကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့ ကာလပေါ့..။ အဲဒီအချိန်မှာ ဉာတတ္ထ စရိယ နဲ့ လောကတ္ထ စရိယ ကို အများကြီးတော့ ဘယ်လုပ်နိုင်အုံးမှာလဲ..။
သူများထက် သာချင်ရင်.. သူများထက်တော့ ပင်ပန်းတာပေါ့.. သမီးလေး..။တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်အောင်.. တက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ .. ပင်ပန်းမယ်..၊ ဆင်းရဲမယ်..။ ညောင်းမယ်..။ မောမယ်..။ ဒါပေမဲ့ တောင်ပေါ်ရောက်တော့ .. သူများတွေ တောင်ခြေမှာ.. မမြင်ရတဲ့ ရှုခင်းတွေကို.. သမီးလေး မြင်ရမယ်..။ သူများတွေ မရှူရတဲ့ တောင်ပေါ်လေ အေးအေး.. ကလေးကို သမီးလေး အားရပါးရ .. ရှူ ရမယ်..။ တောင်ကြီး ဖဝါးအောက်ပါ.. သမီးလေးရယ်..။ သမီးလေးမှာ.. လုပ်နိုင်တဲ့ အရည် အချင်း ရှိတာဘဲလေ..။ သမီးလေးက တော်ပြီးသား..။ လိမ္မာပြီးသား..။ မေတ္တာတွေ အများကြီး.. ရထားတဲ့ သမီးလေး.. ပါ..။ မေတ္တာတွေ ဟာ. သမီးလေး အတွက်.. အင်အားတွေပေါ့ ..။ ဟုတ်လား..။
သူများထက်.. ပိုတော်.. ပိုတတ်တော့ .. လောကကောင်းကျိုးကို .. သူများထက်.. ပိုလုပ်နိုင်မှာပေါ့..။ လောကကြီးထဲမှာ နေထိုင် ရှင်သန်ပြီး..၊ လောကကောင်းကျိုး ကို ဘာမှ လုပ်မသွားတဲ့ သူဟာ..၊ တာဝန်မကျေတဲ့သူ.. ဖြစ်သွားမှာပေါ့..။ နိုင်ရာနေရာကနေ.. လောက ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ဘယ်တော့မှ မမေ့နဲ့ သမီးလေး..။
ဒီ ပညာတွေ တတ်ရင်.. မိသားစု အတွက်..၊ အဆွေအမျိုးတွေ အတွက်၊ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အတွက်..၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်..၊ ကိုယ့် လူမျိုး အတွက်…၊ အို .. တစ်လောက လုံးအတွက်.. ကောင်းကျိုးကို ငါဆောင်မယ်.. လို့ .. တွေးလိုက်စမ်းပါ.. သမီးလေး..။ အားတွေ ပြည့်လာလိမ့်မယ်..။
STRESS ဆိုတာ.. မရဖူးတဲ့ သူမရှိပါဘူး..။ တစ်ခါမှ STRESS မရဖူးဘူး ဆိုရင်.. အဲဒီလူက NORMAL မဟုတ်တော့ဘူး.. လို့ ပြောရမှာ…။
သမီးရေ.. မိန်းကလေးဆိုတာ.. ယောကျင်္ားလေးတွေထက်.. ပိုပြီး.. စိတ်ဓါတ် ခိုင်မာရမယ်..။ သတ္တိ ပိုရှိရမယ်..။ ကြားလား.. သမီးလေး..။
ဘာဖြစ်လို့လဲ.. ဆိုတော့ မိန်းကလေး ဖြစ်လို့..။ လောကဓံကို ခံနိုင်ဖို့..။ အရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲဖို့..
မိန်းကလေးတွေက.. ပိုပြီး.. သတ္တိ ရှိရမယ်..။
(မေမေ့ရဲ့ အဖေ က မေမေ့ကို အဲလို ပြောပြီး train လုပ်ခဲ့တာ..)
သတ္တိသိပ်ရှိကြတဲ့..၊ အရည်အချင်းအပြည့် ရှိကြတဲ့..၊ အရာရာကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မိန်းမတွေ..
သမီးမြင်ဖူးမှာပါ..။ အဲဒီလို မိန်းမမျိုးတွေဟာ.. ကမ္ဘာကျော်ချင်မှကျော်မယ်..။ တစ်ခါတစ်လေ.. ဘေးလူတွေကတောင် .. သတိပြုချင်မှ ပြုမိမယ်..။ ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ သတ္တိနဲ့ အရည်အချင်းတွေက ပါတ်ဝန်းကျင်ကို သာယာ လှပ သွားစေတယ်..။
မိန်းမတွေမှာ.. ထူးခြားတဲ့ ဇွဲ၊ နဲ့ သတ္တိတွေ.. အပြည့်ရှိတယ်.. သမီးလေး..။ သမီးလေးမှာလဲ ရှိတယ်..။ အဲဒါတွေကို .. မမေ့လိုက်နဲ့..။ မိန်းမ တွေမှာ အရမ်းတန်ဘိုးရှိတဲ့ နူးညံ့တဲ့ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ တရားနဲ့၊ သည်းခံ ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားတွေက မွေးရာပါ ရှိပြီးသား.. ၊ အဲဒီစိတ်ဓါတ်အခြေခံမှာ သတ္တိ နဲ့ ဇွဲ ကို ပေါင်းလိုက်ရင် .. “လောက အလယ်.. အလွန့် မိန်းမ …” လို့ ဆိုရမယ်..။
လဲသွားလို့ ထူမဲ့သူ မရှိလဲ.. အံခဲပြီး.. ပြန်ရပ်တည်နိုင်အောင်.. ကြိုးစား ရဲတဲ့ သတ္တိ ရှိတဲ့ မိန်းမတွေ.. အများကြီးပါကွယ်..။ သမီး မြင်ဖူးတယ် မဟုတ်လား..။
သမီးလေး.. ခဏဘန်း .. စိတ်ကလေးတွေ.. ညစ်သွားတာ.. ဒါ ပုံမှန်ပါ..။
ကဲ.. အားယူလိုက်.. ။ မာန်တင်းလိုက်..။ အံခဲလိုက်..။ သမီးလေး.. ဘယ်တော့မှ .. မရှုံးဘူး.. သိလား..။
သီချင်းလေး.. တစ်ပုဒ်ကို .. သမီးလေး အတွက်.. စာသားလေးပြောင်းပြီး.. “သမီးလေး” လို့ ထည့်ပြီး.. ဆိုပြချင်တာ..
“မေမေ ရဲ့ သမီး နိုင်တယ်..
အန ္တရာယ်တွေ ရင်ဆိုင်နွဲတိုင်း..
မေမေ ရဲ့ အားမာန်တွေ.. သမီးလေးရဲ့သွေးထဲကို စီး ဝင်..
အရှုံးပွဲနဲ့ တွေ့ဖို့ရန် အကြောင်း မမြင်..
အမြဲ.. အောင်ပွဲဆင်.. ..”
သမီးလေး .. ရင်ထဲမှာ .. ငါတစ်ယောက်ထဲ… လို့ lonely ဖြစ်တဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်လာတိုင်းမှာ ..
သမီးလေးနားမှာ .. မေမေ .. လူကိုယ်တိုင် မရှိနိုင်သော်လည်း ..
စိတ်ကတော့ သမီးလေး နားမှာ.. အမြဲ အားပေးနေတယ်.. လို့ သိလိုက်..။ ခံစားကြည့်လိုက်.. နော်..။
သမီးလေး.. အားရှိသွားပြီ..၊ ပျော်သွားပြီ.. လို့ မေမေ ယုံကြည်လိုက်တယ်..။
မေမေ ချစ်တဲ့ သမီးလေး.. ကျန်းမာပါစေ….။ ချမ်းသာပါစေ….။ ဘေးရန် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းပါစေ….။
အောင်မြင်တဲ့ ဘဝ နဲ့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အကျိုး….။ လောကသားတို့ရဲ့ အကျိုး များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကွယ်..။
I Love you so much သမီးလေး..။
p.s – သမီးလေး ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မေမေ့ကို ပြောချင်တာရှိရင်.. စာရေးလိုက် .. နော်..။
As per advices of Ma Ma Padonma and agreement of Daw May Aye Oo,
I shared this very valuable post .
Let’s try our best for our mother land , start from your heart,